Awona maqhinga afanelekileyo okufumana okuninzi kwiSafari kwi-iOS | IPhone iindaba
Awona maqhinga afanelekileyo okufumana okuninzi kwiSafari kwi-iOS (1/2)
Kuhlala kulungile ukufunda ngakumbi malunga neendlela ezimfutshane kunye nezixhobo ezinokuthi zisinikeze usetyenziso ngalunye lwe-iOS. Kuya kufuneka sitsho ukuba i-Safari sesona bhrawuza sisetyenziswayo kwi-iPhone nakwi-iPad ngenxa yezizathu ezicacileyo, ke ngoko, siza kugxila kumaqhinga aso njengesiseko sokuphuhlisa lo mxholo. Ke, Ngale mvakwemini yangeCawa sikuphathela awona maqhinga afanelekileyo okufumana uninzi lweSafari kwi-iOS. Uya kwazi uninzi lwazo, abanye abaninzi awuyi kuthi, ke ngoko, iya kukuvumela ukuba ufumane okungakumbi kuyo kwaye uhambe kakuhle ngakumbi kwisixhobo sakho. Ngena, ungaphoswa ngamaqhinga ethu kwaye usebenze nowakho.
1 Layisha inguqulelo yedesktop- Layisha ngaphandle kwebhlokhi
2 Iileyile ezisanda kuvalwa
3 Fumana isicatshulwa kwiphepha
4 Yongeza kuluhlu lokufunda ukuze ubukele kamva ngaphandle kweintanethi
5 Sebenzisa umbono wokufunda
Layisha inguqulelo yedesktop- Layisha ngaphandle kwebhlokhi
Rhoqo uguqulelo lweselfowni yamaphepha athile ewebhu aneempawu ezimbalwa, okanye ziyintlekele yokusebenzisa, yiyo loo nto sikhetha uguqulelo olupheleleyo. Ukwenza oku, kuya kufuneka sicinezele iqhosha lokuhlaziya kwi-Safari ixesha elide, malunga nemizuzwana emibini okanye emithathu. Iya kuthi emva koko isinike umxholo wemenyu. Le menyu inezinto ezimbini ezinokwenzeka, zokulayisha iwebhusayithi yedesktop, okanye yokulayisha iwebhusayithi ngaphandle kwebhlokoumxholo (ukuba sizifakile). Yiyo loo nto amaxesha ngamaxesha ungazigcina ungayi kwikhompyuter ukuze wenze imisebenzi oyifunayo kumaphepha ewebhu ahamba nomxholo omncinci.
Iileyile ezisanda kuvalwa
Lo msebenzi uza kusivumela ukuba siphinde silayishe ezo tabs sizivalileyo ngempazamo ngaphandle kokuyiqonda, okanye sifuna ukubuyela emva kuhambo. Ukwenza oku, siya kuvula i-Safari eneefestile ezininzi ngeqhosha elisezantsi lasekunene, emva koko siyakushiya umnwe ucinezelwe kuphawu «+»Oko kubonakala nje ngezantsi kweziko. Ithebhu entsha iya kubonakala ibizwa ngokuba «ivaliwe Kutshanje»Kwaye apho sinokubona khona ezo tabs esizivalileyo kwimizuzu embalwa edlulileyo.
Fumana isicatshulwa kwiphepha
Rhoqo sifaka iphepha elibonakala ngokomzekelo isifundo, kodwa sikhangela umxholo othile kwaye asifuni kuwafunda onke amagama asisicatshulwa. Kulula, cofa kwindawo yeedilesi kwaye ubhale igama esiza kulikhangela, ngaphandle koloyiko. Phakathi kweziphumo siya kufumana iwebhusayithi kunye nokhangelo lukaGoogle, kodwa emazantsi, umsebenzi uya kubonakala «Kweli phepha (x iziphumo)». Esi iya kuba sisikhangeli se-safari se-iOS, into efana nento esiyifumana eSafari ye-macOS xa sicinezela indlela emfutshane "cmd + F" kwiphepha lewebhu. Ngaba unomdla?
Yongeza kuluhlu lokufunda ukuze ubukele kamva ngaphandle kweintanethi
Njengabahleli, abanye baninzi kwaye abanye bancinci, kodwa ubuncinci mna ndisebenzisa lo msebenzi kakhulu. Xa ndikhangela umnatha ndifumana umxholo endiwuthandayo kwaye ndicinga ukuba kubalulekile ukuba wabelane nawe, ndiyongeza ku "uluhlu lokufunda". Lo msebenzi kwi-Safari usivumela ukuba sigcine iiwebhusayithi ezithile ukuze sizifunde kamva ngaphandle kweintanethi. Wenza njani? Ngokulula, phakathi kwamaqhosha angezantsi sinayo esiza kwabelana ngayo, ethi, njengokuba usazi kakuhle, ikwasebenzela ulwandiso. Ewe, ukucofa eli qhosha kuvula imenyu yesiqhelo yesiqhelo, kwaye phakathi kwemisebenzi engezantsi (yezo zolwandiso) sinenye ethi Msgstr "Yongeza Uluhlu lokufunda ». Ukuba kamva sifuna ukufikelela kolu luhlu lokufunda, ngokunqakraza kwimbali (iqhosha elinencwadi ezantsi), uluhlu lokufunda luyimenyu esembindini emelwe ziiglasi (njengeSteve Jobs ngendlela).
Sebenzisa umbono wokufunda
Xa sikhangela iwebhusayithi enemixholo emininzi ebhaliweyo kodwa nayo izele ngamaqhosha neminye imisebenzi eyongezelelweyo, kulungile ukusebenzisa umbono wokufunda. Kwiiwebhusayithi ezininzi i icon emelwe yimigca emi-4 ethe tye iya kubonakala kanye ecaleni kwebar yedilesi. Xa ucinezelwe, iphepha lewebhu liya kuguqulwa libe yimowudi yokufunda, le ndlela iya kusivumela ukuba siguqule imiba yephepha lewebhu, okubhaliweyo kunye nemixholo ngokungathi yincwadi ye-iBooks, kuyinto emnandi xa kufikwa kubrawuza iiwebhu ze-archaic okanye ngokukude.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Awona maqhinga afanelekileyo okufumana okuninzi kwiSafari kwi-iOS (1/2)
Amaqhinga amahle. Andizange ndibazi abaliqela kubo. Enkosi!!
Molo ngokuhlwa: kwicandelo "Yongeza kuluhlu lokufunda ukuze ulibone kamva ngaphandle kweintanethi" Ndenze uvavanyo ngeli nqaku kwaye lindixelela ukuba "i-safari ayinakulivula iphepha kuba alifumaneki ukuze lifundwe ngaphandle kweintanethi"; Ndikhangele i-Intanethi kwaye ndafunda ukuba oku kuyenzeka ukuba kukho amanqaku angabhalwanga gca, okanye aneZikripthi okanye iikhowudi zangaphakathi ezithintela ukubanjwa kwabo, andizukuzibona ngaphandle kweintanethi. Ngaba yinyani leyo?
Kubonakala kusebenza ngakumbi kukhetho lokukhangela iphepha lewebhu ngegama elithile, cofa kwisikwere kunye notolo kwaye ujonge ukhetho oluthi "khangela kwiphepha"
Andazi ... Luluvo lwam olo
Unokwenza isifundo sichazwe apha ngasentla kwaye akukho nto icacileyo kum
Mholo!! Inomdla kakhulu, kodwa kuya kuba kuhle ukongeza ukhetho lokugcwalisa ngokuzenzekelayo amagama okugqitha kwi-safari, kuyenzeka kakhulu kuba ngokhetho oluwenziweyo ubeka iiphasiwedi kube kanye, kumaphepha ekufuneka ungene kuwo, uwunika ukugcina ipassword kwaye xa kufuneka ungene kwakhona akusafuneki ubuyele kwelo phepha xa ufaka igama lomsebenzisi kunye neephasiwedi, kuba iSafari sele ikhathalela ukugcwalisa okuzenzekelayo, kum iyasebenza, ndihlala ndisebenzisa olu khetho.
UJordy sele eyitshilo enye yezinto endizakuyithetha, kodwa Layisha inguqulelo yeDesktop- Umthwalo ngaphandle kweBlockers njengoFumana isicatshulwa kwiphepha likwindawo yesikwere kwaye ngendlela endicinga ukuba iyafikeleleka.
I-iPhone eneprosesa ye-Intel? Ndiyayithandabuza, izakuyenza nje